EPL: WHM VS MAN U 3-2…Man Utd oo badis oo baskoodii oo la jejebiyey la iskugu daray! (Daawo) – Gool FM
EPL: WHM VS MAN U 3-2…Man Utd oo badis oo baskoodii oo la jejebiyey la iskugu daray! (Daawo)
Raage May 10, 2016
(London) 10 Maajo 2016 – Macasalaamayntii West Ham ee garoonka Upton Park ayaa dhinac ka qurxoonayd maaddaama ay garaaceen kooxda Manchester United, balse dhanka kale way ka foolxumayd waayo taageerayaasha Hammers ayaa dhalooyin ku weeraray baska kooxda Man Utd.
Waxaa bannaanka garoonka iskugusoo baxay kumannaan taageere oo Boleyn Ground ku salaamayey kooxda Slaven Bilic, balse wuxuu jawigu foolxumo isu bedeley markii uu baska Utd soo galay jidka Green Street, iyadoo ay xitaa jabtay muraayadda baska United (waxaana sawir mobile-kiisa uga qaaday daafaca Chris Smalling).
Ciyaarta ayaa Man Utd 3-2 looga adkaaday iyadoo ilaa daqiiqaddii 76-aad 2-1 ku hoggaaminaysey, balse waqtigaas kaddib ayaa 2 gool laga dhaliyey, waxayna taasii god wayn ka qodday rajadii United ee CL.
RASMI: Berlusconi oo heshiis la galay maalqabeennada doonaya AC Milan (Warbixin)
HOR DHAC: Liverpool Vs. Chelsea